Nkran Mantam - Wikipedia
Nkran Mantam mu ne mantam a n'asase sua koraa wɔ Ghana mantam 16 no mu, ne tɛtrɛtɛ yɛ kilomita 3,245.ɛyi gyina hɔ ma ɔha mu nkyekyɛmu 1.4 wɔ Ghana asase mu. ɛno ne Mantam a ɛto so meinu a emu nnipa dɔɔso yiyie a edi Asante mantam akyi. Nnipa akenkan a ɛkɔɔ so wɔ afe 2010 mu no kyerɛ sɛ, emu nnipa dodoɔ yɛ 4,010,054 a egyina hɔ ma ɔha mu nkyekyemu 16.3.
Beaɛ ne ne keseyɛ[sesa]
Nkranfo di afayɛ bi a wato din Homowo a ase kyerɛ ne sɛ ''ɔkɔm huro''. Saa afahyɛ yi fii ase mfi pii a atwam. Wɔhyɛ saa fa yi de kae ɛkɔm kɛse bi esii wɔ nkranfo mu mfe bebree bi. Afahyɛ no yɛ aduane afahyɛ a wɔde hyɛ fa ma nkrafo kɔm abokosem no. Wodi saa afahyɛ yi wɔ Ɔsanaa bosome no mu na Nkran abusuakuo nyinaa hyɛ saa fa yi.
Nnipa akenkan a ɛkɔɔ so wɔ afe 2010 mu no kyerɛ sɛ, emu nnipa dodoɔ yɛ 4,010,054 ,ɛma no bɛyɛɛ mantam a ɛto so mienu a wɔn mu nnipa dɔɔso yi paa. Asante mantam na edikan ma Nkramantam to so mienu. Nea nti a ɛte saa ne sɛ nkrufo di mu atukotena paa.Template:Historical populations
Ntoasoɔ sukuu ahorɔw[sesa]
Ade tɔn bea ahorɔw[sesa]
Akukudam a wɔ yɛ Nkranfo[sesa]
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Nkran_Mantam&oldid=89007"
Nsesae ba kratafa yi so da 16 Ɔbɛnem 2022, mmere 14:46.